युक्रेन र रुसमध्ये भारत र चीनले कसको पक्षमा गर्यो मतदान ? — Sanchar Kendra
युक्रेन र रुसमध्ये भारत र चीनले कसको पक्षमा गर्यो मतदान ?
काठमाडौं। युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणको निन्दा गर्न बसेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी आइएइएको बैठकमा मतदानका क्रममा भारत अनुपस्थित भएको छ ।
रुसले राजनीतिक दुराशयपूर्ण एवम् झूटको बलमा ल्याइएको भन्दै नयाँ प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको छ । रुससँगै चीनले पनि उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको छ ।
क्यानाडा र पोल्यान्डले युक्रेनको तर्फबाट भन्दै आइएइएको ३५ राष्ट्र सम्मिलित बैठकमा प्रस्ताव ल्याएका थिए । उक्त बैठकमा २६ मुलुकहरूले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, सेनेगल र भियतनाम, मेक्सिको र बुरुन्डी मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए ।
रुसलाई ‘चेर्नोबिलसहित सबै युक्रेनी आणविक केन्द्रहरुमा जारी आक्रमण रोक्न’ आह्वान गरिएको थियो । रुस र भारतबीच आणविक उर्जाका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सहकार्य रहँदै आएको छ ।
भारतको एकमात्र विदेशी सहयोगमा निर्मित आणविक केन्द्र रुसको आणविक एजेन्सी रोसएटमको सहयोगमा निर्माण गरेको हो । भारतले बंगलादेशमा पनि रुसी सहयोगमा आणविक केन्द्र निर्माण गर्न पहल गर्दै आएको छ ।
रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि त्यहाँका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई देश छाडेर अमेरिका आउन प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर जेलेन्स्कीले सिधै अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै भनेका थिए,‘मलाई रुससँग भिड्न हतियार चाहिएको छ, भाग्नको लागि सवारी होइन।’
त्यसबेला जेलेन्स्कीकी श्रीमती फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेन्स्की र उनका दुई सन्तान साशा र सिरिलले पनि युक्रेनमै बस्ने निधो गरे।
त्यसपछि नै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भनेका थिए कि रुस उनको र उनको परिवारको हत्या गर्न चाहन्छ। यतिबेला सुरक्षाको कारणले गर्दा राष्ट्रपतिको परिवारको ठेगाना अज्ञात राखिएको छ।
यद्यपी जेलेन्स्कीले भिडिओ सन्देश जारी गरेर आफू युक्रेनमै रहेको बताइरहन्छन्। उता फर्स्ट लेडी ओलेनाले यस्तो गम्भीर घडीमा पनि श्रीमानको साथ छोडेकी छैनन्।
उनले सामाजिक संजालमा रुसले गरेको दमनको विरोध गरिरहेकी छिन्। गतहप्ता मात्र उनले भनेकी थिइन्,‘आज म न त रुन्छु नै न त डराउँछु। म संयमित र आत्मविश्वासी भएर बस्नेछु। मेरा बच्चाहरु मलाई हेरिरहेका छन्। म मेरा सन्तान र श्रीमानको साथमा रहिरहनेछु, युक्रेनमै हुनेछु।’
यस क्रममा जेलेन्स्कीले पनि भनेका थिए,‘फर्स्ट लेडी आजभोली मलाई सोधिरहन्छिन् कि उनी युक्रेनको मद्दत कसरी गर्न सक्छन्। मेरो जवाफ होः विश्वलाई साँचो कुरा सुनाउनु।’
४४ वर्षकी ओलेनाको इन्स्टाग्राममा २० लाख फलोवर्स छन्। उनी यतिबेला युक्रेनी नागरिकलाई मानवीय सहयता चाहिएको र रुसले आक्रमण गरेको विषयमा बोलिरहन्छिन्।
हाल सामाजिक संजालमा उनी संकटकाबीच पनि आफ्ना देशका नागरिकलाई चिन्ता नलिन भन्छिन्। सँधै आशावादी हुन् प्रेरित गर्छिन्।
सन् २०१९ मा फोकस पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा उनको नाम पनि उल्लेख थियो। सरल जीवनशैली रुचाउने उनी सबैसँग नम्र र मिलनसार रुपमा प्रस्तुत हुन्छिन्।
श्रीमान जेलेन्स्कीले देश छाड्न नचाहेको विषयलाई ओलेनाले सम्मान गरेकी छिन्। उनले पनि रुसविरुद्ध युक्रेनले डटेर लड्नुपर्ने बताइरहेकी छिन्।
जेलेन्स्की दम्पत्तिको राष्ट्रवाद, देश प्रेमलाई युक्रेनी जनताले सम्मान गरेका छन्। उनीहरुकै कारण युक्रेनी जनतामा आशा मरेको छैन।